Taịlị granite na marble beige maka ọrụ Hongkong Disneyland.
Taịlị granite na marble beige maka ọrụ Hongkong Disneyland.
A na-eji taịlị granite arụ ebe dị larịị nke ụzọ ụkwụ, mmiri mmiri na nkume mgbochi okporo ụzọ.A na-akpụcha ha nke ọma na agba agba nke beige, isi awọ, oji, na ọcha, n'etiti ndị ọzọ, iji mepụta mmetụta dị iche iche na ala.
Ebe e si enweta mabul beige na-ebili bụ nhọrọ kacha mma maka ihe eji eme ihe eji eme ihe eji achọ ihe eji achọ mma.Ihe mgbochi nkume na-ewu ewu nke ukwuu na ịchọ mma odida obodo, nke a na-ejikarị n'okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, mbara ala, ámá egwuregwu na ebe ndị ọzọ.Ihe mgbochi nkume marble na-acha ntụ ntụ nwere ikuku pụrụ iche nwere agba na udidi eke niile, ma mara mma na nke bara uru.A na-eji ya eme ihe maka pavement ọha na eze;ihe ịchọ mma ubi;Nkume mkpuchi ebe a na-adọba ụgbọala;ihe ndozi ụlọ;mgbidi nche ókè;ụlọ ọrụ hallow block yard Stone ụlọ ọrụ ụlọ.
Anyị bụ otu n'ime taịlị granite na ndị na-emepụta marble na China, ma nwee ike ịnye gị ọnụahịa na ọrụ dị mma.Ọ bụrụ na ịchọrọ taịlị granite na marble, biko kpọtụrụ m n'efu.
Gray Granite, Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Black Granite, Granite odo odo, Gray Gray dị ọkụ, Taịlị mgbidi Marble ọcha,